Afar Xisbi oo Soo Cusbooneysiiyay Xiisaddii Farmaajo Iyo Mucaaradkiisa. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Jan 31, 2018 961 0
Afar xisbi oo kamid ah axsaabta siyaasadda ee ku olloga ah dowladda federalka ayaa mar qura iyagoo isku duuban cod dheer kusoo cusbooneysiiyay khilaafkii ka dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka dhexdeeda ah ah ee ku kacsan.
Xisbiyada kala ah: Daljir, Kulan, Wadajir iyo Madasha Horusocod ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho ku dalbaday in maxkamad lasoo taago shan sarkaal oo ay ku eedeeyeen iney ka dambeeyeen xildii qofood ee lagu dilay guriga C/raxmaan C/shakuur.
Xisbiyadan oo ay ku jiraan rag caan ah oo dowladda kasoo qabtay xilal kala duwan iyo sidoo kale xildhibaano haatan ka tirsan golaha shacabka ayaa u muuqda iney xabadka u garaacdeen ol’olihii awood ku maquuninta ahaa ee ay madaxda dowladda wadeen.
DF waxaa mar walba gudaheeda caado ka ah khilaaf dano shaqsi ku saleysan, waxaana taa asal u ah siyda siyaasiyiintu aaminsan yihiin fara galin shisheeye, iyo iyadoo nin walba ay wadato dowlad dalka ka leh dano gaar ahaaneed.